ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » 12 အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့ smart Move
အားဖြင့် စတိဗ် Nakamoto
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 22 2020 |5မိဖတ်ပြီးသား
မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်များ၏ပေါက်ကွဲကြီးထွားမှုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နေဖို့ရန်ဒီမှာကြောင်းအောင်. ဒီနေ့အလုပ်ရှုပ်နေလူနေမှုနှင့်အတူ, များစွာသောဆိုရင် single အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပိုမိုလွယ်ကူနှစ်မျိုးစလုံးကြောင်းကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်, စျေးနှုန်းချိုသာ, အစဉ်အလာချိန်းတွေ့တဲ့နည်းလမ်းတွေထက်လျော့နည်းအချိန်စားသုံး.
ချိန်းတွေ့ဤနည်းလမ်းသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်အဖြစ်, ဒီနေရာမှာစေရန်အချို့ smart ရွေ့လျားသင်တို့၏အတွေ့အကြုံများကိုပိုမိုကျိုးနပ်နည်းနာကျင်စေနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း:
1. An Enlightened ချဉ်းကပ်နည်းကိုယူ: အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မိတ်ဆက်စကားတဲ​​့နေရာမှာမတူညီတဲ့အမျိုးအစားထက်ပိုမိုဘာမျှမဖြစ်ကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်. ကန့်သတ်သောအချိန်ကကြိုးစားကြည့်ပေးပါကသင့်ကိုခြုံငုံကြည့်လူမှုရေးအစီအစဉ်ကိုဖြည့်စွက်စေ. အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရဲ့ရန်ကိုသာ connection ကိုချိန်းတွေ့ခြင်းမပြုရပါနဲ့, မဟုတ်ရင်သင်အထီးကျန်ဆန်သို့မဟုတ်အပူတပြင်းအဖြစ်ဖြတ်ပြီးလာလိမ့်မယ်. အရည်အချင်းပြည့်မီသောမေတ္တာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံချိန်တွင်အဓိကအားဖြင့်တစ်ဦးနံပါတ်များဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် (ပျမ်းမျှအား၏ပညတ်တရားသည်), လူကိစ္စရပ်များကိုထဲကအလုပ်မလုပ်ပါဘူးမည်မျှမယ်နားလည်သဘောပေါက်. အဘယ်အရာကိုကိစ္စမကျင့်သောသူတယောက်မျှမရှိသည်ဖြစ်စေဖြစ်ပါသည်.
2. အားလုံးတစ်ဦးတည်းက IT မပြုပါ: မိတ်ဆွေတစ်ဦးပါဝင်သောနှင့်အတူတကွဒီအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စွန့်စားမှုအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်ဤကပိုပြီးပျော်စရာကောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပါ. မှတ်စုများနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအတူတူဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းနေအားဖြင့်ပိုမိုလျင်မြန်စွာသင်ယူနိုင်. ဒီစသင်ချွတ်ဖိအားကိုသိမ်းယူမည်, သင်တို့သည်လူနည်းကိုအပူတပြင်းပေါ်လာပါစေ, နှင့် weirdo ရဲ့သူချင်း loners ရှာနေထွက် lurking လိမ့်မည်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖြစ်အစေခံ.
3. လတ်ဆတ်သော OFF START လတ်ဆတ်တဲ့နေဖို့: အခုအသစ်စွန့်စားမှုသို့မည်သည့်စိတ်ခံစားမှုဝန်စည်စလယ်သယ်မထားပါနဲ့. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တိုင်ကြားမှမည်သည့်သဘောထားကိုဖယ်ရှားပစ်သင့်ပါသည်ကိုဆိုလိုသည်, အပြစ်တင်, ဝေဖန်, သို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့မဟုတ်မမှန်ကြောင်းဖြစ်, အချစ်ဇာတ်လမ်း, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်. သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအသစ်တစ်ခုကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာအလားအလာနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါမျက်မြင်မရသောလမ်းဖြစ်လာ. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူ, သင်အမှန်တကယ်ကိုမြင်လျှင်သို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးသူတို့ကိုတွေ့ဆုံမပါဘဲအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသိကျွမ်းဖို့ထူးခြားအခွင့်အလမ်းများရှိသည်. သင်ကမျက်နှာ-To-မျက်နှာအစည်းအဝေးလုပ်ဖို့သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအပြုံးလိုချင်တယ်နည်းတူသင့်သောသဘောထားကို sparkle Make.
4. တစ်ဦးကောင်းကိုပေးဆောင် date ကို SITE SELECT: ထိုပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့လစာဆိုဒ်များကိုအသုံးပြုပါ. ဆယ်ကျော်သက်များကသွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်သောအခမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ, အိမ်ထောင်သက်ကလူ, နှင့် stalkers. အစီအစဉ်၏ကုန်ကျစရိတ် freeloaders ထွက်ပြဘို့အထိုက်သည်. သင်ဟာရှိသည်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အတိုးပေါ် အခြေခံ. စတဲ့နယ်ပယ်ဈေးကွက်ရှာသင်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုဖြည့်နိုင် (DateMyPet.com အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဘို့အ) သို့မဟုတ်သင်ဝင်စားလတစ်ထူးခြားတဲ့အရည်အသွေး (တိုင်းရင်းသားနောက်ခံအရောင်, ကြီးမားသောအရွယ်အစား).
5. A Great ဓာတ်ပုံဖြင့်ထိရောက်သောအေဒီဘက်မှ: အရည်အချင်းထက်မြက်သောမိတ်ဆွေတိုတိုဖြစ်သည်ကိုသင်တို့အားကောင်းတစ်ခုဖေါ်ပြချက်ရေးဖို့ရှိသည်, ချိုသော, နှင့်မှတ်မိလွယ်တဲ့. များလွန်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များထွက်မပေးပါနဲ့. နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏ element တစ်ခုတည်ရှိနေပါသည်, လွန်း. သင်ကချော့မော့သောဓာတ်ပုံရှိသည်ကြောင်းသေချာစေပါ, မကြာသေးမီဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးတည်းသင်၏, နှင့်သင်၏မျက်နှာပေါ်မှာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအပြုံးနှင့်အတူ. အများအပြားနမူနာဓါတ်ပုံကို ယူ. အကောင်းဆုံးတစ်ဦးကိုရွေးချယ်ပြီး. လိုအပ်လာရင်, အများအပြားဓာတ်ပုံများထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်အခါအားလျော်စွာသူတို့ပြောင်းလဲ. ပုံတစ်ပုံ၏တန်ခိုးကိုလျှော့မတွက်ပါနဲ့. ဖတ်တယ်သောတရုတ်စကားပုံကိုသတိရပါ: တစ်ဦးကဓာတ်ပုံတစ်ပုံတစ်ဦးသည်စကားလုံးတထောင်ထိုက်သည်.
6. တစ်ဦးကလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အင်တာနက် date Pattern ား: သင်ကိုယ်တိုင်ကန့်သတ်ရန်3လူတစ်ဦးချင်း Correspondence. တစ်နာရီခန့်များအတွက်မွန်းတည့်တွင်ကော်ဖီအတွက်အများသုံးအရပ်ဌာန၌ခရီးဦးကြိုပြုခြင်း. တစ်ခုခုနောက်မှစီစဉ်ထားရှိသည် (မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံ) သင်တို့ပတ်လည်ရှည်လွန်းတည်းခိုသို့စကားပြောမရနိုင်အောင်. သင်မသက်မသာခံစားရလျှင်, မိတ်ဆွေတစ်ဦးတစ်လျှောက်ကိုဆောင် ခဲ့. သူတို့သည်လူနှစ်ဦးမယ့်အစားတဦးကိုတွေ့ဆုံရန်ဆုကြေးအခွင့်အလမ်းရှိသည်တွေ့ဆုံရန်သွားလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြော. သင်သည်ဤမိတ်ဆက်စကားမှတဆင့်ရယူလိုလျှင်, ထို့နောက်သင်ပုံမှန်ချိန်းတွေ့ပုံစံကိုနှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်, နောက်ကွယ်မှအင်တာနက်ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထွက်ခွာနှင့်မေ့လျော့နေ.
7. သင်တို့ကိုမလိုလားဘူးအရာအပေါ်ရှင်းလင်းမှု GET: ပေါင်းပင်ထဲကရှုံးနိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လူတွေ. အကျဘက်ကိုပေါ်မှာသင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်နှင့်ထောက်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးကိုယုံကြည်စိတ်ချ. လူတစ်ဦးကိုမည်သည့်နည်းထူးဆန်းတဲ့ပုံပေါ်လျှင်, ကြောင်းအခွင့်အလမ်းအပေါ်လွန်သေချာပါစေ. သင်သည်ဤအထူးသဖြင့်သူနှင့်အတူမှားဖြစ်စေခြင်းငှါ, သင်မူကား, ရေရှည်မှာပိုဘေးကင်းလိမ့်မယ်. ထူးဆန်းတဲ့အပြုအမူတချို့ကသဲလွန်စများပါဝင်: များလွန်းအီးမေးလ်များကိုမကြာခဏ, လိင်ကတိကျပြတ်သားဘာသာစကား, မှတ်ချက်တွေကိုထိန်းချုပ်, အလွန်အကျွံအမျက်ဒေါသ, ခက်နည်းဗျူဟာ, ကျင်ဟန်ကပုန်းကွယ်လျှို့ဝှက်ချက်များသို့မဟုတ်အရာများနှင့်လည်းများစွာ.
8. သင်အလိုရှိဘာလုပ်တယ်: နှလုံး၏စည်းကမ်းချက်များ၌သင်တို့ကိုရေရှည်မေတ္တာကိုမိတ်ဖက်အတွက်ကြိုက်ဘယ်အရာ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စိတ်ကူးရှိသည်, ဇာတ်ကောင်စရိုက်, ပုဂ္ဂိုလ်, နှင့်သဟဇာတ. ကိုက်ညီတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာဂိုးဖြင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေပါ, ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, အလားတူ core ကိုတန်ဖိုးများ, နှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့မထိုက်မတန်. မကောင်းတဲ့သူတွေကိုထုတ်ပေါင်းပင်နိုင်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးမှာသတိထားပါ, သင်မူကား, မေတ္တာဆက်ဆံရေးအတွက်ချင်တာလဲသောကောင်းသောအရာအဘို့အကြည့်ဖို့မြန်ဆန်ပြီးဖြစ်. ဒါကအပြုသဘောဆောင်သင့်ကိုစောင့်ရှောက်နှင့်အခြားသူများကိုသင်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေမည်.
9. အစောပိုင်းသူတို့ကိုပယ်သွား SPOOK NOT ရှောင်ရန်များ: များပြားလွန်းသောမေးခွန်းများကိုမေးမြန်းခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုပယ်သွား scaring တစ်ဦးမေတ္တာကိုမိတ်ဖက်အဖြစ်ကိုရှောင်ရှားအထူးကောင်းမွန်မည့်အလားအလာနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်သင်ရှာတွေ့ပါ, မေးခွန်းများကိုမှားမျိုးကိုတောင်းဆိုနေတာ, အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအရည်အသွေးတွေကို, အရမ်းငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုထင်ရှားပေါ်ထွန်းခြင်းကို, အဘယ်သူမျှမကအခြားလူမှုရေးဆိုင်များတွင်ရှိခြင်း, မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ, သို့မဟုတ်အလားအလာ suitors. သင့်ရဲ့အားသာချက်နှင့် ပတ်သက်. လွတ်လပ်စွာပြောဆိုပါ, ဒါပေမယ့်ကျိန်းဝပ်သို့မဟုတ်သင့်အားနည်းချက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်မလိုအပ်လည်းမရှိ. ကသဘာဝကျကျအပြန်အလှန်အကျိုးပြုနေတဆင့်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏အဖြစ်သတင်းအချက်အလက်ဟာသာမန​​်နှုန်းနဲ့စီးဆင်းကြစို့. လွန်းမကြာမီသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအလွန်တောင်းဆိုနေတာသို့မဟုတ်ထုတ်ဖေါ်ပြသ၏ထောင်ချောက်ထဲသို့မကျပါနဲ့.
10. ရှေ့နောက် NOT ရှောင်ရန်များ, သင်နေတတ်သလိုနေပါ: လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအံ့ဩဘွယ်ဖြစ်ရနိုင်သောကွန်ပျူတာ Terminal ကိုနောက်ကွယ်မှာ, လက်မထပ်ရသေး, အောင်မြင်သော, ကြွယ်ဝသော, လူအပေါင်းတို့နှင့်အတူတကွအံ့သြ, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဖြစ်မှန်တွေအများကြီးကွဲပြားခြားနားဖြစ်နိုင်. သူတို့ကိုယ်သူတို့ဟောင်းနွမ်းဓါတ်ပုံကိုသုံးသောသူကိုအခြားသူများကဲ့သို့ဖြစ်ရနှင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့လောက်ပုံကြီးချဲ့ profile များကိုမရေးပါ. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးသားပါပြီးရင်လည်းရိုးသားဖို့တစ်လိမ္မာပါးနပ်စွာနည်းလမ်း၌သင်တို့၏အလားအလာကိုမေး. မဆိုရိုးသားမရှိဆိုရင်, တစ်ခုခုကိုမဆိုယုံကြည်မှုရှိမဖြစ်နိုင်. ဒါကရေရှည်မေတ္တာကိုဆက်ဆံရေးမဆိုမျိုးကိုဖွင့်ဖို့နည်းလမ်းမရှိင်.
11. အားပြန်သွင်းနိုင် AND REEVALUATE ဖို့တစ် BREAK ယူ: သင်သတိထားမဟုတ်ပါဘူးလျှင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သင်သည်ဆင်းဝတ်ဆင်နိုင်. ဒါဟာလည်းချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့် ပတ်သက်. သင်လျော့နည်းလူသားနှင့်ပိုမိုအဆိုးမြင်စေနိုင်သည်. ငါသည်သင်တို့ကိုသာတက်လက်မှတ်ထိုးကြောင်းအကြံပြုဒါကြောင့်3အစပိုင်းတွင်သည့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့ဖို့လတစ်လရဲ့ subscription. အပြီးနောက်3လကျော်ဖြစ်ပါသည်, တစ်ချိုးယူနှင့်သင့်အောင်မြင်မှုနှင့်ဆုံးရှုံးမှု reevaluate. ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်သင်၏ကြော်ငြာမိတ္တူသို့မဟုတ်သင်၏ဓာတ်ပုံကိုပြောင်းပေးဖို့လို. ပညာရှိတဲ့ငါးဖမ်းသမားလိုပဲ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင့်သင်တို့ကိုသင်ဆွဲဆောင်ခံရဖို့ဟန်ရှိသတ္တဝါအားလုံးဘယ်လိုသင့်ရဲ့စာကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်. သင်လူတစ်ဦး၏တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကိုကိုဆွဲဆောင်လျှင်ဒီတစ်ခါလည်းသည်မြင်နိုင်ရန်အတွက်အခြား site ကိုကြိုးစားဖို့အချိန်င်. သို့သော်အပေါင်းတို့၏အများဆုံး, ခဏအနားယူအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သို့သင်၏နောက် entry ကိုအကောင်းမြင်အပြုသဘောဖြစ်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ရှုထောင့်ပြန်လည်ကူညီပေးပါမည်.
12. FUN သို့မဟုတ် at all မပြုပါ: ဤလှုပ်ရှားမှုပျော်စရာ Make သို့မဟုတ်မှာအားလုံးပါဝင်ပါဘူး. အဖြစ်ကမကြာမီလိုသောဖြစ်လာအဖြစ်, သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစား့ဝှက်ချက်များကိုပျက်စီး, သို့မဟုတ်အလိုမကျအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုနှင့်တူနေ၏, ကလုပ်ဆောင်နေတာကိုရပ်တန့်နှင့်သင့်အသက်တာ၌အခြားအရာတစ်ခုခုပေါ်အာရုံစူးစိုက်. အင်တာနက်ကိုချိန်းတွေ့အများအပြားသည်လူများအဘို့အောင်မြင်နိုင်မည်ဒါပေမယ့်စမတ်ရွေ့လျားအောင်ပေါ်တွင်မူတည်, အလွန်ကြီးစွာသောစိတ်နေစိတ်ထားကိုထိန်းသိမ်းထား, ပျော့ပျောင်းမှုမရှိသောသည်းခံခြင်းရှိခြင်း, နှင့်ကံနောက်ဆုံးမှာသင်သွားရာလမ်းကိုကြွလာသောအခါအဆင်သင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ခြင်း.
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မိတ်ဆက်စေတဲ့နည်းလမ်းသစ်ထက်ပိုမိုဘာမျှမဖြစ်. ချစ်ခြင်းမေတ္တာလမ်းကြောင်းကိုအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်သာစမတ်ရွေ့လျား Make နှင့်စကားမပြောနိုင်သောသူများကိုရှောင်ကြဉ်. လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်သင်တို့အတွက်တဦးတည်းရှိလျှင်သင်သိဘယ်တော့မှမ. နှင့်မေတ္တာတို့၏ဂိမ်းအတွက်, ကသာအသက်ဘို့ဆုရှင်ဖြစ်လာမှတဦးတည်းသာကြာ. ကံကောင်းပါစေနှင့်သင်၏ခရီးပျော်မွေ့!